Ọnụma PUBG mbanye anataghị ikike 🥇 Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
ọnụma PUBG mbanye anataghị ikike
Ọnụma anyị PUBG eji Aghọ Aghụghọ Ule dị nnọọ ka nke ọ bụla ọzọ, nke mere ndị ọrụ ji etinye aka na ya iji debe ha n'elu egwuregwu ha.
Nweta ohere dị ịtụnanya PUBG Ọnụma site na iji Key-Product Product
Need chọrọ enyemaka enyemaka ntakịrị? Mbanye anataghị ikike maka ọbụna ogologo site ịzụta a 1-Izu Product Key!
Bụrụ otu n'ime ndị ọrụ Gamepron raara onwe ya nye nke ọma na igodo Ngwa 1 ọnwa
Site na njirimara niile dị ịtụnanya anyị tinyego na PUBG a, ọ ga-abụ ihe ịtụnanya mgbe mmadụ mechara jikwa wepu gị (nke ga - abụ ihe na - adịghị adị, biko!).
PUBG Ọnụma mbanye anataghị ikike Ozi
Ọnụ iwe PUBG na-etinye ike n’aka gị site na njikọta na-enweghị ntụpọ nke ngwa PUBG kachasị eji mbanye anataghị ikike. Enweghị okwute a na-ahapụghị mgbe ọ bịara na ngwa ọrụ a, ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọrụ Gamepron ji mara ya ahụ. Ngwaọrụ ọ bụla nwere mmetụta dị iche, na PUBG Rage Hack adịghị iche! Ozi ọma ahụ bụ na aghụghọ a dị mma dị ka nke ọ bụla ị ga - ahụ na Gamepron, na - eme ka ọ dị mma maka onye ọ bụla na - achọ inweta ihu mgbe ị na - egwu PUBG.
PUBG siri ike dị ka ọ dị, yabụ gịnị ma ị mee ka ihe dịtụ mfe? Anyị PUBG Ọnụma mbanye anataghị ikike atụmatụ amasị nke Iro ESP (Igbe na ọkpụkpụ), Ozi Iro, Nkebi ESP, Aimbot, 2D Rada, na ọbụna ndị ọzọ! E tinyela atụmatụ gị niile kachasị amasị gị, tinyere atụmatụ ndị ọzọ n'elu.
Ebumnuche Bone scans
Chọpụta hicgbọala Na-achọ
Ebumnobi Iro na-adọ aka ná ntị
Ebum n’uche Onye Iro
Player na-achọ gị
Banyere iwe PUBG
You nwere ike iji PUBG Ọnụma mbanye anataghị ikike na-emeso ndị iro gị dị ka pawns na a chessboard. Na-eji ire ụtọ Aiming na Bone Prioritization, ọ nweghị ohere ị ga-atụ uche ọ bụla nke agbapụ gị - ịbanye n'ime egbe ga-abụ ụzọ izuike izu ike maka gị ugbu a! Maraworị na ị ga - emeri mgbe a gbanyere PUBG Ọnụma mbanye anataghị ikike, ọkachasị mgbe ị tụlere 2D Radar na Aimbot iji rụọ ọrụ ọnụ n’enweghị nsogbu. Mee ka ndị iro gị pụọ na Radar wee gbaa ha ọsọ ọsọ! Akpanaka Ngwá Agha na-akpaghị aka dịkwa maka mgbe ị na-apụghị na ammo, yana Visible Check na Fight Mode.
Gini mere iji jiri PUBG Ọnụma karịa ndị ọzọ na-enye ọrụ?
Na-arụsi ọrụ ike maka ego gị, yabụ gịnị kpatara ị ga - eji tinye ya na enweghị PUBG Hacks? Nwere ike ịzụta hacks a pụrụ ịdabere na ya mgbe niile na Gamepron, ọ bụ ya mere ị ga-eji na-enyocha anyị mgbe niile tupu ị na-ele ebe ọzọ. Anyị nwere ọkọlọtọ dị elu ijide tupu ewepụta ngwaọrụ anyị ọ bụla, yabụ na ị marala na ị na-enweta ezigbo ngwaahịa - mgbe ị na-azụ ahịa na Gamepron, ịnweta PUBG kacha mma bụ nkwa! Egwuregwu ahụ nwere ike iwe iwe zuru oke, yabụ ịnagide ụkọ PUBG Cheat nke siri ike ịrụ ọrụ ga-eme ka ihe ka njọ.
Nchịkọta egwuregwu dị n'ime mbanye anataghị ikike ọ bụla dị ezigbo mkpa, n'agbanyeghị ihe ndị ọzọ nwere ike iche. Ọ bụrụ na ihuenyo gị jupụtara na junk ị ka nwere ike inwe mmeri, mana ị na-ekpori ndụ? Anyị na-enye a sleek na otutu na-egwuregwu na menu na-eme ka toggling kpọmkwem mbanye anataghị ikike nhọrọ na (na gbanyụọ!) A ikuku. Ggbanye bụ usoro dị mkpa nke hacking, ebe a ga-enwe oge ebe ị ga-egwu ogbi ma pụta dị ka onye aka ya dị ọcha. Y’oburu na ichoro ihe kacha mma n’ime egwuregwu g’eme ghari, Gamepron n’enye gi oge obula.
Aghọ Aghụghọ Ule ụzọ na-azụta gị PUBG mbanye anataghị ikike ebe a na Gamepron!
Emela, ị gaghị enubata na otu aghụghọ a ọ ga - ahụ ndị na - ekiri ya.
Mba, aghụghọ a anaghị agụnye spoofer hwid. Anyị na-enye spoofer dị iche iche maka PUBG.
Nke a aghụghọ bụ mpụga, nke pụtara na ị ga-egwu egwuregwu na borderless mode ma ọ bụ windowed.
Ọ bụ ezie na ndị ọhụụ na-agbasi mbọ ike ịghọta egwuregwu ahụ na ndị nwere ahụmịhe na-achị achị karịa, ị nwere ike ịbanye na egwuregwu ahụ na nke mbụ gị jiri obi ike na-eji iwe iwe PUBG anyị.
Dịla njikere inwe mmetụta ọ dịka inwe mmeri maka mgbanwe?
Njikere Na-achị anyị PUBG Ọnụma mbanye anataghị ikike?